Sawirro: Puntland oo damaaand qaaday amaanka maalgashatada. | XAL DOON
Home NEWS Sawirro: Puntland oo damaaand qaaday amaanka maalgashatada.
Sawirro: Puntland oo damaaand qaaday amaanka maalgashatada.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si rasmi ah u furay shirka maalgashiga Puntland, waxa uu Madaxweynuhu ka jeediyey khudbad aad u muhiim ah oo si dhaba u taabanaysa arrimaha Maalgashada ee Puntland.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in shirkani maanta qabsoomo, dadkii lagu casuumey intoodii badnayd inay soo aqbalaan oo kasoo qayb-galaan waa calaamad dhiirigelin anaga noo ah in hadafyadii ugu waaweynaa ee aan ka lahayn shirkan intiisii badnayd ay qabsoontay, waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Guddigii soo qaban qaabiyey shirkan oo runtii dhabar adayg iyo kalsooni ay ku qabaan inay hawshan qabtaan muujiyey, waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb-qaadatay shirkan qabsoomiddiisa”.
“Maxay Dowladda Puntland shirkan ay ka lahayd? Saad ogtihiin dalka Soomaaliyeed mudadii u dambaysey ee 29 sano ah wuxuu ku jirey xilliyo daqaalo sokeeye socdeen iyo xilli kabasho ay socotey, Puntland Alle mahaddiisa waxa ay ahayd meelaha nasiib ka uhelay inaanay dagaalo sokeeye ka dhicin, in xasilooni ka dhacdo, in dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaanadooda ka dhaceen dhibaato ay usoo hayaamaan Puntland, sida tariikhda laga sheegay, dadka reer Puntland waa dad caan ku ah nabad jacaylka iyo xasiloonida, saldhigga noloshooduna uu yahay ganacsiga iyo ka shaqaynta horumarinta nolosha, xirfaddii yarayd ee ahayd bucshirada waxay gaysiisay horaantii qarnigii 19-aad markay ku filnaan weydey degaanadooda inay u baqoolaan degaano kale oo ka baxsan Puntland haddaa tariikhda dib u raacdaan degaanada Soomaaliyeed oo dhan, waxaad ku arkaysaan dukaanadii iyo ganacsiyadii ugu horaysey waxaa lahaa dad reer Puntland ah iyo dad carab ah oo weliba Yamaniyiin u badan, waxay u talaabeen Africa Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, iyo South Africa dadka inta badan hormuudka u ahaa ganacsiga waxay u badnaayeen dad reer Puntland ah, Waxaan aad u arkay wadamada khaliijka Imaaraadka iyo Sucuudiga waxaa ka furtay ganacsato reer Puntland ah”. Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland.
“Waxaan is weydiiney maadaama reer Puntland awooddaas leeyihiin, dalkana ay uga tageen isbedelkii ku dhacay. “Ma haboon tahay hadda in la abuuro jewi kale oo khayraadkeena aan kaga faa’iidaysanayno”, waxaa nagu soo dhacday awood badan ay leeyihiin dadka reer Puntland oo haddii dib loosoo celiyo oo lagala shaqeeyo iyaga, hantidooda iyo hantida ummadaha kale ee adduunka iyo dowladda oo diyaar u ah inay fududayso waxyaabaha ku saabsan maalgelinta oo u baahan qorshaha dheer haday iskaashadaan.
“Armay suurtagal tahay marlabaad Puntland iyo Soomaaliyaba fursad kale oo ka balaadhan tan ay maanta haystaan, oo u horseedda dadkeeda xasilooni oo ka saarta dhibaatooyinka ay ka mid tahay shaqo la’aanta sababtay in dadku dalka ka qaxaan oo dalal kale nolol u raadsadaan, “Armay suurta gal tahay inay arrintaas bedesho, hadafkaasi waxa uu ahaa hadaf, markay dowladdu dood badan ka kayeelatay ay u aragtay inay tahay munaasib in shir noocan oo kale ah la qabto”. Ayuu yri Madaxweynaha Dowladda Puntland.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullahai Deni ayaa si rasmi ah u furay shirka maalgashiga Puntland oo muhiimad gaara siinaya, taageerayana ka faa’iidaysiga khayraadka dihin ee Puntland ceegaaga, gaar ahaan maalgelinta fursadaha jira, waxaana uu Madaxweynuhu u mahadnaqay dhammaan shacabka reer Puntland oo taageeray qabsoomidda shirkan, kaas oo socondoona sadex maalmood oo maanta ku jirto 15-17, Sep, 2019.